Hue, ebe njedebe na Vietnam | Akụkọ Njem
Otu n'ime ebe kachasị mma na Vietnam es Hue, obodo ochie na ọ bụbu isi obodo nke mba ahụ na ọ bụ ya mere, ọ bụ otu n'ime ndị kacha ochie. Ọ nwere ọtụtụ akụkọ ihe mere eme, ọbụlagodi akụkọ ihe mere eme n'oge na-adịbeghị anya n'ihi na ọ bụ otu n'ime ndị kacha ata ahụhụ na agha a na-emegide United States, mana n'otu oge ahụ ọ na-echekwa saịtị mara mma nke UNESCO kwupụtara Ihe Nketa Worldwa.
Yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịmata oge gara aga dị ebube nke mba ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia, Hue bụ ebe ị na-aga na ebe anyị na-aga taa.
2 Ihe ị ga-ahụ na Hue
Ọ dị na etiti etiti obodo ebe Hue dị. Na Central Vietnam a na-echekwa ọtụtụ ebe akụkọ ihe mere eme na ọnọdụ dị mma, otutu ala gbara osimiri okirikiri na otutu ala mara mma. E wezụga Hue ị nwere ike ịgagharị na Dalat, Phong Nha, Hoi An, Da Nang ma ọ bụ Nha Trang.
Mana obi abụọ adịghị ya na Hue bụ otu n'ime ebe kachasị elu n'etiti etiti mba ahụ. Ndị eze nke usoro ndị eze Nguyen wuru obodo a n’akuku ubi na-eme nri n’akụkụ osimiri na n’elu ugwu osisi. Taa ọ bụ ebe mara mma nke pagodas, ọmarịcha ahịa na ụlọ Art-Deco.
Ihe ị ga-ahụ na Hue
Anyị nwere ike ịmalite site na ịbanye n'ime Hue Buddha mgbọrọgwụ ma jee ije na ha ebe obibi ndị mọnk na pagodas. Ahapụrụ m aha atọ ndị kacha atụ aro saịtị: ndị Yhien Mu Pagoda nke nwere ụlọ elu asaa a maara nke ọma, ndị Dieu De Pagoda na a mara mma ime na Ebe obibi ndị mọnk nke Tu Hieu ya na ndi-onozi nke ala-eze-ya, ọdọ-miri-ya nile, nke ndi riri nne na ndi-nchu-àjà ebe nile.
Kama, imata Imperial vietnam ị ga-aga Ihe ncheta nke Hue, nnukwu ụlọ ochie nke ka na-ewe ogologo ohere. Ezinụlọ eze Vietnamese chịrị afọ 143 ma lee ụlọ na akụ ndị lanarịrị ya.
E nwere ụlọ eze, pavil na ụlọ ihe nkiri na ịgagharị ebe a bụ ụzọ kachasị mma iji hụ ihe bụ Courtlọikpe Imperial. Ọ bụrụ na ị mee njem dị mkpirikpi gbadaa osimiri ahụ ị ga-ahụkwa ili ndị eze nke Tu Duc, Minh Mang na Khai Djnh, nwanne kacha mma dị n’etiti ije na okike.
Ugbu a Hue nwekwara a oge gara aga na-echetara anyị afọ ndị ahụ French na-achị. Na-eje ije site na Le Loi e nwere ndị kpọmkwem colonial owuwu, dị ka Lalọ nkwari akụ La, Art-Deco ịke, na Oclọ akwụkwọ sekọndrị Quoc, arches nke Àkwà Mmiri Truong Tien nke Gustave Eiffel mere n'onwe ya, onye nwere Towerlọ Elu Paris, ma ọ bụ Malecon de Le Cercle Sportif.
Mgbazinye igwe kwụ otu ebe ọ bụ ụzọ kachasị mma iji jegharia gburugburu na gburugburu ya. Nwere ike iru ebe ndị a niile n'ime ya wee rute ebe ị ga - eji echiche dị egwu. Dịka ọmụmaatụ, ya Àkwà mmiri Tianh Toán nke bụ àkwà mmiri kpuchie taịl nile, mara mma, ma ọ bụ na-efunahụ n'okporo ámá dị ka Bach Dang ma ọ bụ Le Loi, otu n'ime ihe ndị kachasị mma na ndị a ma ama iji nwee ekele maka ndụ obodo. Site na igwe kwụ otu ebe ị nwekwara ike ịmara ili nke Gia Long. O doro anya, ị nwekwara ike gbazite rickshaw ma ọ bụrụ na ị na-adịghị amasị pedaling.
Na n'ezie, ị nwekwara ike ịga ije Ma ọ bụ ihe a na-atụ aro nke ọma ma a mata ebe niile. Na mmiri na ìhè nri ị pụrụ ịmalite a njem gaa Bach Ma National Park ma tufuo onwe gị na ntanetị nke ụzọ ụkwụ, ma ọ bụ gbagoro n'etiti pine nke Thien An ma ọ bụ lee ọdịda anyanwụ site na Vong Canh Hill, dika ha nile n dome. Echefukwala na e nwere Osimiri Perfume ma na ị nwere ike mgbe niile, na-eme obere oge ụgbọ mmiri n'ehihie.
Eziokwu bụ na Hue nwere nnukwu kichin Ọzọkwa. M na-ekwukarị na ezumike kwesịrị ịbụ ezumike gastronomic, yabụ ana m akwado ya ebe a. Nri Asia bara ezigbo uru ma n’ebe di otua, ya na ihe ohuru, ma odi nma.
El Ahia Dong Ba ọ dị jụụ, nwee agba, na-esi ísì ụtọ. Nwere ike ịzụ ahịa ebe a ma n'ahịa na mkpọsa, ọ bụ ebe dị mma iji nwaa nri nri mpaghara dị ka Banh beo ma ọ bụ banh khoai ma ọ bụ maka nri ndị anaghị eri anụ. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ iri n’ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ, ị nwere ike ime ya na Hanh ma ọ bụ na ọmarịcha Café Sua Da.
Kedu mgbe ị kwesịrị ịga njem gaa Hue? Mmiri dị n'etiti February na njedebe nke EprelJune na July bụ ọnwa na-ekpo ọkụ ma na-acha ọkụ. Mgbe ahụ, mmiri ozuzo na-abịa, n'August, ma jiri nwayọ na-adịgide ruo ọgwụgwụ nke Jenụwarị. Ya mere, enwere ike inwe idei mmiri, nke na-adịkarị site na Ọktọba. Ee, kalenda ahụ dị obere ma ọ bara uru ịmara n'ihi na ọ nweghị ihe dị njọ karịa oge mmiri ozuzo na ebe dịka nke a.
Kedu ka ị ga-esi ruo Hue? Zọ kachasị ọsọ bụ were ụgbọ elu site na Hanoi ma ọ bụ Ho Chi Minh ruo Phu Bai Airport na Hue. Ọdụ ụgbọ elu ahụ dị ọkara awa site na etiti obodo. Wayzọ ọzọ bụ iji ụgbọ oloko gaa Hue site na ahịrị Nyochaghachi Express, bọs ma ọ bụ gbazite ụgbọ ala nke onwe site na ọdụ ụgbọ elu mba ụwa na Danang, awa abụọ.
Nwere ike ime njem otu ụbọchị site na Hue? Ee, dị ka anyị kwuru na mbido enwere ebe mara mma na Central Vietnam na nso Hue dị ka Da Nang, Dalat na Hoi An. Naanị ka ị cheta ha, Dalat bu ebe gbara osimiri okirikiri mara mma nke ukwuu, nwere ọdọ mmiri dị n'etiti, dị mma maka ndị di na nwunye, ihe ndị a na-eme n'èzí na ọbụna ndị na-egwu golf. Ọ bụ ebe ugwu ewu ewu na oge ọchịchị FrenchOh, ọ bụ ya mere e ji nwee ọtụtụ Europe na ebe a.
Da Nang nwekwara osimiri, ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, ụlọ oriri na ọ cafụ cafụ na ụlọ mmanya. Ọ bụ nnọọ obi ụtọ ebe na ya Central osimiri na ọtụtụ ebe ntụrụndụ, otu n’ime ihe kacha mkpa n’obodo a. N'ikpeazụ bụ Hoi An, obodo ọdụ ụgbọ mmiri na Thu Bon River. O nwere etiti akụkọ ihe mere eme, ubi osikapa nke na-ahụ n'ụsọ oké osimiri, pagodas na abalị na-ejegharị oriọna.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Ihe ị ga-ahụ » Hue, ebe njedebe na Vietnam